( ပိတောက်မြင်လေတိုင်း ) | Myanmar Gazette News Media Forum Network
Creative Writing » ( ပိတောက်မြင်လေတိုင်း )	18
( ပိတောက်မြင်လေတိုင်း )
Posted by တောင်ပေါ်သား on Apr 27, 2015 in Creative Writing, Poetry | 18 comments
အမေ့သား ဘာမှားလို့ အဖော်မဲ့
ပြောလှည့်ပါလား အမိမာတာ ၊
lu lu says: တစ်ယောက်တည်းနေ တစ်စိတ်တည်းထား တတ်အောင်
အောင် မိုးသူ says: အရှုပ်ထဲက ရှင်းအောင်နေ။ တစ်ယောက်တည်းနေ တစ်စိတ်တည်းထား။ အကောင်းကံချစ်မှ အချစ်ကံကောင်းမယ်။ တရားစာအုပ်နာမည်လေးတွေ။ ဒါပေမယ့် အဓိပ္ပာယ်ရှိ။
မဟာရာဇာ အံစာတုံး says: အချိန်လွန်မှ ပိတောက်ပွင့်
တရားကို ဆောင် ……
. နောင် .. နောင် .. နောင် … [ဇီးသီး .. ဗျို့ …]
မြစပဲရိုး says: ဒီလောက် အဖော်တွေ အိမ်မှာ အပြည့်ကို လောဘ မကြီးနဲ့ လေ ကိုမျိုး ရဲ့။
ကျွန်မ ကတော့ ဘာလို့လဲ မသိ။ “ပိတောက်” ကို ရင်မခုန်။ :-))
တောင်ပေါ်သား says: လောဘမကြီးပါဘူး အရီးရယ်
ကဗျာ လို့ပဲ သဘောထားပါနော့ အရီးက ဘာပန်းကိုမှ ရင်ခုန်တာလဲဟင် ?
ဟီး ဟီး စတာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 2282
Ma Ei says: မနေ့က တစ်မြို့လုံး ပိတောက်ပွင့်တွေနဲ့
ဒီနေ့တော့ ပွင့်ကြွေတွေ မြေပြင်မှာပြန့်ကျဲ
အလှဆိုတာလဲ တခဏပါဘဲမို့ ကိုမျိုးရေ…
တောင်ပေါ်သား says: မမြဲသောတရားပါလား လို့ မှတ်ရူရင်း
Mike says: Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 12395
ခင်ဇော် says: မနာလိုလို့ ဒီနေ့မှ လာမန့်တာ။
တောင်ပေါ်သား says: ဘုကိုစိတ်တိုနေသတုန်းဗျ :P
Alinn Z says: ပိတောက် မြင်လေတိုင်း… သူငယ်ချင်းဖြစ်သူ.. စိုးမိုး(ကာရံ) ကို သတိရတယ်.
သူ့ ချစ်ချစ်နာမည်က ပိတောက် လေ… Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 8413
Ma Ma says: ပိတောက်ပန်းကတော့ တစ်နှစ်မှတခါပွင့်ခဲတာမို့ ပွင့်တယ်ဆိုတာနဲ့ တနည်းနည်းနဲ့ ပတ်သက်ချင်တာ။
မနေ့ကတော့ ပျိုပျိုအိုအို ကြီးကြီးငယ်ငယ်တွေ ပိတောက်ပန်းတဝေေ၀နဲ့ လှနေကြရောပဲ။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 14449
kai says: မကြာခင်.. ဂျပန်မှာ ဟနမိ.. ဆကူရာတွေပွင့်တာသွားကြည့်ကြတဲ့ပွဲတော်တွေလာတော့မယ်..။
သူတို့ ဆကူရာ(ချယ်ရီ)ပန်းတွေ.. တပင်လုံးဝေအောင်ပွင့်.. ပြီးတော့ ပြန်ကြွေတာကို.. အောက်မှာအခင်းလေးတွေခင်းထိုင်.. တနေ့လုံးမိတ်ဖွဲလက်ဆုံစားကြသောက်ကြ.. နေတတ်ကြတယ်ဗျ..။
အဲဒါ.. အခုတော့ တကမ္ဘာလုံး၇ဲ့..တိုးရစ်စွဲဆောင်ရာကြီးဖြစ်နေတာမို့.. ယူအက်စ်မှာလည်း.. လူတွေ ဂျပန်က.. ဟနမိသွားဖို့.. ပြင်နေကြတာတွေ့ရပါတယ်..။
ပိတောက်ကတရက်နဲ့ကြွေတာ.. မကြီုက်ရင်လည်း.. ငုပန်းနဲ့..တွဲပေါ့..။
ပန်းပွင့်နေတဲ့.. ပိတောက်ကိုင်းကိုဖျောင်းကနဲ့ချိုး.. ဘုရားတင်တာက… ကုသိုလ်ရမယ်ဆိုတဲ့..စိတ်ကြီးတွေနဲ့.. ဖြစ်ပါ့မလား…တွေးနေမိ..။ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1684
အောင် မိုးသူ says: အခုဆို မြန်မာမာ ပန်းငုချယ်ရီရှိတယ်လေ။ ဖွားဖက်တော်ပန်းတဲ့ ပြီးတော့ အချို့တွေက အညာချယ်ရီလို့လည်း ခေါ်ကြသေးတယ်။ ပန်းငုချယ်ရီကိုလည်း အဲ့လိုလုပ်ရင်ဖြစ်တာပဲ။
kai says: Cherry Blossom Tourism Makes Japan’s Economy Bloom …
Mar 24, 2015 – In Japan this spring, the color of money is pink. Thanks to the weak yen, Japan is suddenly affordable. Visitors from Asia and elsewhere are .
manawphyulay says: အထီးကျန်တစ်ဦးရဲ့ နွေအကုန်နှုတ်ဆက်သည့် ခရီးပေါ့လေ…
naywoon ni says: ကွကို အ​ဖော်​မဲ့တာ ဘယ်​နဲ့ မာတာမိခင်​ကို ဆွဲထည့်​ရသလဲကွယ်​ ။ ​ကျေးငှက်​က​လေး​တွေ​တောင်​ သူ့ဖာသူပဲအ​ဖော်​ရှာတာ ။ ဘယ်​သူ့မှအားမကိုးပါဘူး Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike 1910
တောင်ပေါ်သား says: မဟုတ်ရပါဘူး အဘနီရယ်
အမေ့ကို မေးကြည့်တာပါဗျာ Log in to Reply	Was this answer helpful?LikeDislike LeaveaComment Cancel replyYou must be logged in to postacomment.	My Points	You need to be logged in to view your points.